Perikopa (Mg)| Page 6
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXV manaraka ny Trinite 25-30 Novambra 2019 “Andriamanitra tsy mandao ny olony” *
25 novembre 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Hevitry ny Lohateny: Ny hoe ”Andriamanitra tsy mandao ny olony” dia milaza ny firaisana antoka sy fanekena nataon’Andriamanitra amin’ny olony, dia izay mino ny Anarany ka noraisiny ho an’ny tenany (1 Pet.2:9b). Ireo no nitenenany fahizay hoe: ”Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXIII manaraka ny Trinite 11-16 Novambra 2019 “Ny olon’Andriamanitra, mpanompo ny fahamarinana” *
12 novembre 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Hevitry ny Lohateny: Andriamanitra dia marina sy tia fahamarinana ka mankahala ny ratsy (Sal.11:7), ary tiany ny olony ho tahaka Azy (Sal.34:15-16). Hoy Jaona Apostoly: ”Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako” 3 Jao.4. Izany no toetra maha-zanak’Andriamanitra, dia ny maha-mpanompon’ny fahamarinana, dia ny sitrapon’Andriamanitra … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXII manaraka ny Trinite 04-09 Novambra 2019 “Andriamanitra Mahatoky”
4 novembre 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Hevitry ny Lohateny: Andriamanitra dia Mahatoky, satria Marina Izy, dia Andriamanitra tsy mivadika amin’ny fanekeny, ary tsy miova amin’ny teniny, fa manatanteraka izany. Ataony tokoa izany, satria Izy dia ”Andriamanitra tsy mahay mandainga” araka ny voalazan’ny Soratra Masina Azy (Tit.1:2). Mahasaropiaro Azy tokoa ny fahamarinany, raha hoy i Balama nandà an’i Balaka tsy hamadika ny … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIX manaraka ny Trinite 28 Oktobra – 02 Novambra 2019
28 octobre 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
“Andriamanitra tsy mahafoy ny olony” Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony, ary tsy mahafoy azy mandrakizay. Satria hoy Izy: ”Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao” Jer.31:3. Toky sy fanomezana antoka lehibe no ataon’Andriamanitra, satria manam-pahalemena sy tsy fahatanterahana isika olombelona, ary tsy mitoetra fa mbetika miovaova; izany hoe, raha … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVIII manaraka ny Trinite 21-26 Oktobra 2019 “Ny mino velona amin’ny fitiavana” *
22 octobre 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fitarihan-kevitra: ”Ny mino velona amin’ny fitiavana” satria Andriamanitra Izay inoany sy tompoiny dia ”Andriamanitra Fitiavana” (1 Jao.4:16). Koa raha niteny ny Apostoly Paoly manao hoe: ”Tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko” Gal.2:20, dia nilaza indrindra izy nanao hoe: ”Ny fitiavan’i Kristy no manery anay” 2 Kor.5:14, dia Kristy izay ivelomany … [Read more…]
14 octobre 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Hira & Filazantsara Alahady XVII manaraka ny Trinite 14-19 Oktobra 2019 “Andriamanitra manome rariny ny olony” Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manome rariny ny olony, satria tia rariny Izy sady tia ny olony. Fa mitaky rariny ny olona satria iharan’ny ”tsy rariny”, dia ny tsy fahamarinana. Ny rariny omen’Andriamanitra ny olony dia Izy manamarina ny finoany, ka manatanteraka … [Read more…]
8 octobre 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Hira & Filazantsara Alahady XVI manaraka ny Trinite 07-12 Oktobra 2019 “Fantaro Andriamanitra” Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Fantaro Andriamanitra”, dia manambara fa Andriamanitra dia tsy miafina na te-hiafina amintsika mpanota, fa azontsika fantarina tsara Izy; ary tiany isika hahafantatra Azy mba hahazoantsika mino Azy, ka handray ny famonjeny sy higoka ny fahasoavany tsy lany (Jao.1:16). Araka … [Read more…]
Fitarihan-kevitra: Toetra maha-zanak’Andriamanitra ny mitia, satria ”Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16. Koa izay rehetra naterany dia tiany sady ataony ho mitovy toetra Aminy, araka ny voasoratra hoe: ”Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, [Na: anarana, na fahefana]” Jao.1:12. Ny hery sy ny zo ary ny … [Read more…]
23 septembre 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Hira & Filazantsara Alahady XIV manaraka ny Trinite 23-28 Septambra 2019 “Ny mino velon’ny finoana” Fitarihan-kevitra: ”Ny mino velon’ny finoana”. Teny fanorenana nataon’ny Tompo izany, araka ny voasoratra hoe: ”Ary ny oloko marina [ny marina] dia ho velon’ny finoana; Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko (Hab.2:3,4). Fa isika tsy mba naman’izay mihemotra … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIII manaraka ny Trinite 16-21 Septambra 2019 “Velona ny Tenin’Andriamanitra”
16 septembre 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fitarihan-kevitra: Velona ny tenin’Andriamanitra ary tsy ho faty mandrakizay. Tsy voafetra ny fahavelomany ary tsy voasakana ny fiasany. Fa hoy Jesosy: “Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35. Hoy koa ny anjely Gabriela raha avy nanambara tamin’i Maria ny amin’ny hahaterahan’i Jesosy amin’ny alalany: “Fa tsy hisy … [Read more…]